पृथ्वीमा स्थापित प्रमोदवनमा हामी सधैंभरि सुखी र आनन्दित भई जीवन बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ!
तपाईं भन्नुहोला, ‘यस्तो पनि सम्भव छ र?’ परमेश्वरको राज्यले यो सम्भव बनाउनेछ भनेर बाइबलमा बताइएको छ। साथै मानिसहरूले त्यस राज्य र हाम्रो लागि उहाँले राख्नुभएको उद्देश्यबारे सिकेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ।—भजन ३७:११, २९; यशैया ९:७.
परमेश्वर हाम्रो हित चाहनुहुन्छ।
मायालु बुबाले आफ्ना छोराछोरीको हित चाहेझैं स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो बुबा पनि हामी सधैंभरि खुसी भएको चाहनुहुन्छ। (यशैया ४८:१७, १८) उहाँले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ: “जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ, ऊ सधैंभरि रहिरहन्छ।”—१ यूहन्ना २:१७.
परमेश्वरले देखाएको बाटोमा हामी हिंडेको उहाँ चाहनुहुन्छ।
हामी सृष्टिकर्ताको ‘बाटोमा हिंडेको’ उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ हामीलाई ‘आफ्नो मार्ग देखाउनुहुन्छ’ भनी बाइबल बताउँछ। (यशैया २:२, ३) सबै मानिसलाई आफ्नो इच्छाबारे थाह दिन परमेश्वरले “आफ्नो नामको लागि मानिसहरू” जम्मा गर्नुभएको छ।—प्रेषित १५:१४.
परमेश्वर हामी एकतामा बाँधिएर उहाँको उपासना गरेको चाहनुहुन्छ।
यहोवाको शुद्ध उपासनाले मानिसहरूमाझ विभाजन ल्याउँदैन बरु तिनीहरूलाई साँचो प्रेममा बाँध्छ। (यूहन्ना १३:३५) जुनसुकै ठाउँका पुरुष हुन्‌ या स्त्री, तिनीहरूलाई एकतामा बाँधिएर परमेश्वरको सेवा गर्न आज कसले सिकाइरहेको छ? आउनुहोस्, यो पुस्तिका पढेर यस प्रश्नको जवाफ थाह पाउनुहोस्।
हामीसँग बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्। के तपाईंले यहोवाका साक्षीहरूसित बाइबल अध्ययन गर्न थालिसक्नुभयो? छैन भने थाल्न चाहनुहुन्छ कि? यसको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। परमेश्वरको नजिक हुने यो एउटा राम्रो तरिका हो भनेर तपाईंले थाह पाउनुहुनेछ।
हाम्रा प्रकाशन निश्शुल्क प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंको नजिकै भएको राज्यभवनमा गएर वा कुनै यहोवाको साक्षीसित कुरा गरेर आफ्नै भाषाको प्रकाशनको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीबारे इन्टरनेटमा हेर्नुहोस्। यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेबसाइट www.jw.org/ne हेर्नुहोस्। त्यस साइटमा गएर तपाईं बाइबल अनलाइन पढ्‌नका साथै ७५० भन्दा धेरै भाषामा हाम्रा थुप्रै प्रकाशन हेर्न र छाप्न सक्नुहुन्छ।